हिड्ने कुर्ची माथी जड्या मान्छे
घूम्ने मेच माथी अन्धो मान्छे त सुन्नुभएकै छ। उती बेला भूपी शेर्चनले लेखेको नेपालमा अहिले सम्म पनि सान्दर्भिक छ। सायद घुम्ने मेच माथी बस्ने अन्धा मात्र होइनन बहिरा पनि छन होला। त्यसैले नेपालको दिन दिनानु दिन खस्कदैं छ। तर मैले कुरो गर्न लागेको चांही हिड्ने मेच माथीको जड्या मान्छेको हो।
मिनीसोटाको अलि दुर्गम क्षेत्र (Proctor,MN) तिर एकजनालाइ के सनक चलेछ कु्न्नी उसले सोफा इस्टाइलको कुर्चीमा घांस काट्ने मेसिनको इन्जिन जोडेछ। पांग्रा त जोड्यो जोड्यो,कुर्चीमा क्यासेट
प्लेयर,चिया राख्ने कप होल्डर,पत्रिका राख्ने र्याक पनि तयार गरेछ। अनि अंध्यारोमा हिड्न सजिलो होस भनेर हेड लाइट पनि जोडेछ। तयार भयो उसको हिड्ने कुर्ची। हिड्ने भन्दा पनि गुड्ने कुर्ची भनौं यस्लाइ।
गुड्ने कुर्ची घरमा के काम? अनि त्यै कुर्चीमा गुडेर पुगेछ भट्टी पसलतिर। भट्टीमा करिब करिब ८-९ बोतल बियर सक्काएपछी घर फर्किन तरखर गरेछ। कुर्ची यसो पार्किगं लटमा गुडाउंदै के थियो जांडले गडबड गरेछ। कुर्ची गुड्दै बाटो तिर होइन नजिकै पार्किगं गरिराखेको गाडीतिर सोजिएछ। उक्त गाडीसित ठोक्किए पछी गुड्ने कुर्ची र जड्या मान्छे त्यही लड्नपुगेछन।
तुरुन्तै पुलिस आएर रक्सी खाएर गुड्ने बस्तु चलाएको अभियोगमा पक्राउ गरेछ। जड्या ब्यक्ती(Dennis LeRoy Anderson) कानुन अनुसार दोषी ठहरिएपछी पुलिसले उक्त कुर्ची जफत गरेछ। धरौटी,वकिलको खर्च आदी असुल्न पुलसिले त्यो कुर्ची लिलाम गर्दैछ। ति जड्या ब्यक्ती पनि के कम, आफ्नो अदालती खर्च उठाउन आफू त्यो गुड्ने कुर्चीमा बसेका फोटोहरु लिलाम गर्दैछन। आफ्नो प्यारो कुर्ची लिलाम गरेको छजोकमा उनले अहिलेको भन्दा झन राम्रो कुर्ची बनाउने भनेर पूलिसलाइ उल्टै चुनौती दिएका छन। तपाई पनि त्यो कुर्ची र फोटोहरु किन्न सक्नुहुनेछ। यि सबै लिलाम ebay.com मा गरिंदैछ। अहिले त्यो कुर्चीको लिलाम भाउ ३७ हजार डलेर पूगिसकेको छ भने डेनिसको हस्ताक्षर उक्त तस्बिरको भाउ ४०५ डलर पुगेको छ। तपाइ पनि यो गुड्ने कुर्ची किन्ने भए यांहा जानुहोला।
यत्ती मात्रै हो !। के यो गाउँ खाने कथा हो :)
मातेर के भो माथि चढ्या मान्छे
गिदी किन चाहियो नाम किन्न
म त यसै नि मान वढ्या मान्छे
डर त लाग्छ ढलिन्छ कि भनी
भर के पर्नु टेकोमा अढ्या मान्छे
खडा छु ,कडा छु हात दर्हो छ
नत्र किन उठथे म लड्या मान्छे
चम्काइदिए चम्के आखिर
म धेरैले आँखा गढ्या मान्छे
यस्ता मान्छेले गरेरै हामी कहिल्यै उँभो नलाग्ले भयौँ । पैसा र तागत भए यहाँ ठुलो हुन केहि चाहिँदैन । वुद्दि पनि चाहिँदैन । गजल साह्रै चित्त वुझ्यो मलाई ।
झुक्किएछ कि टाँसो राख्न् भनेको त क्या गजब यति नै पो! तर कुरो धेरै बोलिएको, बोलेका छन। यो पनि नयाँ प्रबिधी पो परेछ कि दौतरीमा। वाका जी को मेहनत कदर गर्नु पर्ने छ। शायद नेपालीयन जी ले पुष्प गुच्छाको बन्दोबस्त पनि गर्नु भएको होला।
ठरकी सर गाउं खाने कथा होइन, जांड खाने कथा हो।
हिजो यसो सुरु गरेको मात्रै के, बल्ल आज सकियो। अब कुरो मिल्यो होइना त?
लेकाली जी वाका जीलाइ फूलको गु्च्छा तयार छ। उहांका गजल निकै राम्रा हुन्छन,हाम्रो माया नै पुष्प गु्च्छा हुन।
लेकाली जि यस्तै प्रबिधी बनार लेक तिर चलाउने की?
ठरकि दादा ji amazing
this poen fro waka ji
waka ji amazing
प्रसंग रमाईलो रहेछ । पहिला शिर्षक मात्र आयो , ट्रेलरको रूपमा अनि धेरैलाई यो गाऊँखाने कथा पो हो कि भनेर फँसाएछ । जे होस किस्ताबन्दीमा आउँदा यसको 'सस्पेन्स' बढेर नै गयो । कुर्चि माथिका जँड्यहा उपद्रो गर्न रूची राख्ने खालका रहेछन् र यिनको लिलामी वस्तु किन्ने मेरो कुनै रूचि नभएको अनुरोध गराउन चाहन्छु । कतै हामीलाई वस्तुको विज्ञापन गर्दिएको आरोप त लाग्ने हैन ?
शिर्षक मात्रा पाउदा कता मनमा तरङ उठ्यो
तेसैले यसो गजल बनाइ दिए । आखिर यो त
कुर्शिको बिज्ञापन पो परेछ त । यहाँहरुको माया र सदभाब
पाएरै लेख्न मन लाग्छ । गजल मन पराइ दिनु हुने सबैलाई धन्यवाद छ ।
गजल राम्रो छ वाका जी। गजल पढ्दा र त्यो जड्या मान्छेको चर्तिकला हेर्दा ठ्याक्कै कुरो मिल्दछ।
यो कुर्चीको बिज्ञापन होइन है, यस्तो पनि हुंदो रहेछ भनेर रमाइलोको लागी टासेको मात्र हो। अमेरिकन मिडया न हुन कहिले बेलुनको पछि कुद्छन कहिले कुर्चीको!
सन्की मान्छे को सिर्जन्सिलता को समाचार लाई नेपालीयन ब्रो ले रोचक सिर्शक दिनु भो.. वाका ब्रो ले त्यो सिर्सक लाई झनै रोचक र मर्मस्पर्सी गजल बानाइदिनुभो.. सिर्जना को बिस्तार साचै अनौठो छ